ခန္ဓာကိုယ်ကိတ်ကိတ်လေး ကို ထင်ထင်ရှားရှားလေး ပေါ်လွင်အောင် အမိုက်စား လေ့ကျင့်ပြနေတဲ့ အေးမြတ်သူ ရဲ့ အသဲယားစရာ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Sar
By Shwe SarPosted on January 22, 2021
ဒါက တော့ ကျစ်လစ်လှပ တဲ့ ကိုယ်လုံး လေး ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ခန်း တွေ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် လုပ်နေ တဲ့ အေးမြတ်သူ ရဲ့ Live Video လေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်း တွေ အမြဲလုပ်နေတာ ကြောင့်လည်း သူမရဲ့ ကိုယ်လုံး လေးက ဘယ်ဖက်ရှင် မျိုးနဲ့မဆို လိုက်ဖက် နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ်တွေ လည်း ကြည့် ရှု ခံစားနိုင် အောင် မမြ တ်ေ လး ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို တစ်ဆင့် ပြန် လည် ကူးယူ တင် ဆက်ပေး လိုက် ရပါတယ် နော် ။
ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ပါးချိုင့်လေး တွေကြောင့် ပုရိသ တွေ ချစ်မဝ ဖြစ်နေရသူ လေး ကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချော လေး အေးမြတ်သူ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမဟာ အသက် ( ၃၀) ကျော် လို့ ထင်ရက် စရာမရှိ လောက်အောင် ကို နုပျို လှပ နေသူလေး လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ အနုပညာလောက မှာ လည်း အောင်မြင်မှု တွေရ ရှိထားပြီး အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆု လ ည်း ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မင်းသမီး လေး တစ်လက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
မမြတ်လေး ရဲ့ ကိုယ်လုံး လေး ဟာ လည်း မိန်းကလေးချင်း တောင် အားကျ ငေးမော ယူနေရတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ ဟာ ကျန်းမာ ရေး အ တွက် အား ကစားလေ့ကျင့်ခန်း တွေ အမြဲလုပ်ဆောင် နေသူလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တိုင်း ကိုလည်း ပရိသတ် တွေ သိရှိ ရ အောင် အမြဲဝေမျှ တင်ဆက်ပေး နေ တာလည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
Aye Myat Thu ပို့ဈတငျရာတှငျ အသုံးပွုမှု ၂၀၂၀၊ ဩဂုတျ ၁၊ စနနေေ့
source and photo crd : Aye Myat Thu ’ s facebook page
ဒါက တော့ ကဈြလ လှပ တဲ့ ကိုယျလုံး လေး ဖွဈအောငျ လကေ့ငျြ့ခနျး တှေ ပွငျးပွငျး ထနျထနျ လုပျနေ တဲ့ အေးမွတျသူ ရဲ့ Live Video လေး ပဲ ဖွဈပါ တယျ ။ ဒီလိုလေ့ ကြ ငျ့ ခနျး တှေ အမွဲလုပျနတော ကွောငျ့လညျး သူမရဲ့ ကိုယျလုံး လေးက ဘယျဖကျရှငျ မြိုးနဲ့မဆို လိုကျဖကျ နတော လညျး ဖွဈပါ တယျ ။ ပရိသတျတှေ လညျး ကွညျ့ ရှု ခံစား နိုငျ အောငျ မမွ တျေ လး ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို တဈဆငျ့ ပွနျ လညျ ကူးယူ တငျ ဆကျပေး လိုကျ ရပါတယျ နျော ။
ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ ပါးခြိုငျ့လေး တှကွေောငျ့ ပုရိသ တှေ ခဈြမဝ ဖွဈနရေသူ လေး ကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီး ခြော လေး အေးမွတျသူ ပဲ ဖွဈပါ တယျ ။ သူမဟာ အသကျ ( ၃၀) ကြျော လို့ ထငျရကျ စရာမရှိ လောကျအောငျ ကို နုပြို လှပ နသေူလေး လညျး ဖွဈပါ တယျ ။ အနုပညာလောက မှာ လညျး အောငျမွငျမှု တှရေ ရှိထားပွီး အကယျဒမီ ထူးခြှနျဆု လ ညျး ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ မငျးသမီး လေး တဈလကျ လညျး ဖွဈပါ တယျ ။
မမွတျလေး ရဲ့ ကိုယျလုံး လေး ဟာ လညျး မိနျးကလေးခငျြး တောငျ အားကြ ငေးမော ယူနရေတာ လညျး ဖွဈပါ တယျ ။ သူမ ဟာ ကနျြးမာ ရေး အ တှကျ အား ကစားလေ့ ကြ ငျ့ခ နျး တှေ အမွဲလုပျဆောငျ နသေူလညျး ဖွဈပါ တယျ ။ သူမရဲ့ လှုပျရှားမှု တိုငျး ကိုလညျး ပရိသတျ တှေ သိရှိ ရ အောငျ အမွဲဝမြှေ တငျဆကျပေး နေ တာလညျး ဖွဈ ပါ တယျ … .
Aye Myat Thu ပို့ဈတငရြာတှငြ အသုံးပှုမှု ၂၀၂၀၊ ဩဂုတြ ၁၊ စနနေေ့
Previous post မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ အကိတ်ဆုံး နဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှဆုံး ဆယ်လီ (၁၀)ဦး
Next post ဘာမှမ၀တ်ထားတဲ့ ရေချိုးခန်းက ပုံတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့ မမသင်ဇာ